Mpanamboatra sy mpamatsy sarontava tarehy - China Medical mask maskazy orinasa
Ny sarontava medikaly dia vita amin'ny lamba sosona iray na maromaro tsy misy tenona. Ny fizotry ny famokarana lehibe dia misy meltblown, spunbond, rivotra mafana na fanjaitra fanjaitra, sns, izay misy ny vokatra mitovy amin'ny fanoherana ny ranon-javatra, ny sivana sombiny ary ny bakteria. Izy io dia karazana lamba fiarovana fiarovana. Azo zahana eran-tany ho an'ny fividianana sy fanaingoana, Na aiza na aiza misy anao eto ambonin'ny tany, azonay atao ny mandray ny baiko ary manolotra azy aminao!
Ny sarontava fandidiana ara-pitsaboana dia miaro kokoa noho ny sarontava ara-pitsaboana, ary afaka mitafy azy ny ankizy. Raha mbola kely loatra ilay zaza dia asaina mampiasa sarontava manokana ho an'ny ankizy, ka ho tsara kokoa ilay karazana mihidy.
1. Mba hiantohana ny fahasalaman'ny zaza dia noforonina miaraka amin'ny fenitry ny sarontava fandidiana azo alefa.
2. Mba hanaovana akanjo tsara kokoa dia vita amin'ny karazana ankizy izy io. Ny haben'ny saron-tava zaza: 14,5 * 9.5cm.
Ny fahombiazan'ny sivana KN95 dia mahatratra 95%.
Ny mpikaroka sasany dia nanao fanadihadiana mifandraika amin'ny fahombiazan'ny fiarovana sy ny fotoana fanaovana saron-tava fiarovana ara-pahasalamana N95. Ny valiny dia naneho fa ny fahombiazan'ny filtration dia nijanona teo ambonin'ny 95% ary ny fanoherana ny taovam-pisefoana dia tsy niova firy taorian'ny 2 andro nanaovan'ny mpamonjy voina KN95.
Raha mitafy tsara, ny fahaizan'ny sivana KN95 dia ambony noho ny saron-tava mahazatra sy fitsaboana.